UNdoro ukuthi akanandaba nakancane nezikhalazo zePirates | News24
UNdoro ukuthi akanandaba nakancane nezikhalazo zePirates
Cape Town – Umgadli we-Ajax Cape Town uTendai Ndoro uthi akumkhathazi nakancane ukukhononda kwe-Orlando Pirates ngokufakwa kwakhe esikwatini esishaye amaBhakabhaka ngo-3-0 kowe-Absa Premiership.
AmaSea Robbers abekhalaza nje kulandela isinqumo seDispute Resolution Chamber ye-PSL esivune ama-Urban Warriors, yize umthetho weFIFA ukubeka ngokusobala ukuthi umdlali oakavumelekile ukudlalela amakilabhu amathathu ngesizini eyodwa.
Lo mdlali odabuka eZimbabwe wadlalela amaBhakabhaka ngasekuqaleni kwesizini ngaphambi kokuyodlalela i-Al Faisaly yaseSaudi Arabia ngaphambi kokubuyela ku-PSL.
Kepha uNdoro, 32, uthi akumkathazi nakancane ukudluliswa kwesinqumo yi-PSL kanye nokukhalaza kwePirates ngokudlaliswa kwakhe kuleli sonto.
"Bekunodaba olukhona kepha manje ngiyajabula ngoba sengiyakwazi ukudlala ibhola, yingakho ngila kwi-Ajax. Ibhola selidlalwa emahhovisi esikhundleni sokuba lidlalwe enkundleni,” esho etshela iSowetanLIVE.
"Sizobona ukuthi lolu daba luphetha kanjani kepha ngiyacabanga ukuthi sengikhululekile manje. Ukube bekungenjalo bengeke ngivunyelwe ukuba ngidlale.”